Idolobhana LikaKhisimusi Eliholwa Ngokhuni
Uhulumeni waseChina ugunyaze ngokusemthethweni i-RCEP, futhi isiza sase-Wal-Mart sase-US sivulekele ngokusemthethweni zonke izinkampani zase China.
UNgqongqoshe Wezohwebo: Uhulumeni wase-China uyivume ngokusemthethweni i-RCEP Ngo-Mashi 8, uWang Wentao, uNgqongqoshe Wezohwebo, ubephendula umbuzo wentatheli ngokuqala ukusebenza nokuqaliswa kweReg ...
Iqoqo lemihlobiso engu-20 enhle kakhulu kaKhisimusi online, ireferensi enhle yesizini.
Njengoba sazi ukuthi uKhisimusi, usuku lokuzalwa lukaJesu, luyiholide lendabuko laseNtshonalanga, ngoDisemba 25 minyaka yonke. IMisa luhlobo oluthile lwenkonzo yesonto. UKhisimusi ngumkhosi wenkolo, ngoba ugujwa njengosuku lokuzalwa o ...
Zenziwe ngaziphi izinto zokuhlobisa zikaKhisimusi?
Njalo ngoKhisimusi, besithenga imihlobiso nezipho eziningi zikaKhisimusi zokuhlobisa indlu futhi sinikeze abangane bethu izipho, kuyinto enhle kakhulu. Futhi lapho uthola izipho zikaKhisimusi ezinhle, futhi usetha imihlobiso kaKhisimusi enhle, ungahle ube nelukuluku lokuthi ...
Into ethandwayo yokuhlobisa ikhaya ngalesi sikhathi sikaKhisimusi isiphanyeko sensimbi samagoda namasheya
Iyiphi into ethandwa kakhulu kule sizini kaKhisimusi? Njalo ngenkathi kaKhisimusi, ungabuza ukuthi yiziphi izinto ezihamba phambili zokuhlobisa ikhaya? I-anwser mhlawumbe isihlahla sikaKhisimusi, ukukhanya kwezintambo zikaKhisimusi, iSanta Sack, amakhadi kaKhisimusi noma enye into. Kepha kule sizini, into ehamba phambili kakhulu, i ...
Izinkampani zivuselela ukuvumelanisa nemodeli entsha
Ngu-YUAN SHENGGAO Ngesikhathi se-127th Canton Fair, cishe izinkampani zase-China ezingama-26,000 zikhombise inqwaba yemikhiqizo online, inikezela ngemithombo eyingqayizivele yemisakazo bukhoma kubathengi abavela kuwo wonke umhlaba, kusho abahleli. "Ukusiza kangcono ukubamba umcimbi online, senze umzamo omkhulu," kusho uQin Lei, m ...